Forum serasera malagasy finoana - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : finoana
hasiniony - 12/01/2013 14:10
Eny, foana ny didy teo aloha noho ny halemeny sy noho izy tsy nahasoa, fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona, ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa, izay anatonantsika an’Andriamanitra.
Fa maninona kay no mbola misy foana hatramin'izao ny fampianarana hitandrina ny lalàna? Hany ka manjavozavo amin'ny olona ny amin'ilay fanekena vaovao nomen'ny Kristy izay mitondra ny olona ho any an-danitra?
Nehemiah - 14/01/2013 07:45
Nehemiah - 14/01/2013 07:48
Amena. Tsy hadalàna no nitenenan'i Kristy hoe : "tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa." (Mt. 9:17) ary "satria matimaty hianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa haloan’ ny vavako hianao" (Ap. 3:16)